Apple inotangisa chigadziko chitsva chemagineti cheiyo Apple Watch | Ndinobva mac
Patakafunga kuti Apple yaisa patafura zvigadzirwa zvese zvakarongwa zvegore rino ra2018, zvinotishamisa nechitsva zvishongedzo zveApple Watch. Mune ino kesi, kunyangwe isu tisina nhau dzeAirPower, zvinotishamisa neisina waya yekuchaja base kubhadharisa yedu Apple Watch.
Pachiitiko ichi, chigadzirwa cheApple chakatangwa hachina kuratidza kufarira kukuru pakati pevashandisi, avo vasingawane hunyanzvi mukuvhurwa kwenzvimbo itsva yekuchaja yakafanana neyazvino uye inopa mabhenefiti akafanana. Musiyano unowanikwa mukugadzirwa, saka unogona kusarudza iyo yaunonyanya kufarira pakugara kwega kwega.
Iyi nyowani yemagineti yekuchaja base iri kutengeswa kuUS Apple Store. Kuvhiya kwacho kwakafanana kupfuura hwaro hwazvino, kuisa wachi pachigadziko kusvikira bhatiri rayo raiswa. Kunyangwe kune rimwe divi, isu tinowana mutsauko neiyo yapfuura base. Hwaro hwakakura. Iyo yakatenderera chimiro chegadziko, inokutendera kubhadharisa wachi munzvimbo yakatwasuka. Chimwe chinhu chitsva chinowanikwa mune yepakati chikamu cheiyo base, iyo inogona kusimudzwa kuti uone iyo wachi skrini uye woishandisa mukati yemubhedha wachi wachi.
Asi kana iwe uchida kutenga iyo yekare yekuchaja base, mhanya kuchitoro chiri padyo, sezvo Apple iri kutsiva mareferenzi azvino neMLDW2AM / A kuverenga yeiyo vhezheni nyowani ine modhi MU9F2AM / A. Muchokwadi, vatengesi vari kuwana iyo nyowani modhi pavanoda yakawanda stock.
Mukati medu hatina kuwana chero shanduko, kana ndizvo zvazvinoita, nekuti Apple haiburitse yakawanda data. Mukana wekushandura chero chinhu kana chimiro, iyi muripo yaifanirwa kunge yakamhan'arwa kuAmerican FCC. Kune rimwe divi, ichi chikamu hachizive chero shanduko kana chakakosha uye hachigone kuchikurukura mumwedzi mitanhatu inotevera. Naizvozvo, hwaro hwechaji ndi5 watts.
Iyo yekuchaja base, kusvikira iyo nguva yekunyora chinyorwa, ingori chete iripo kuUS Apple Store pamutengo we 79 $. Isu tinoshuvira kuwana iyo modhi pane iyo Spanish webhusaiti mumaawa mashoma anotevera uye kusvika parizvino hatizive mutengo weichi chinowanikwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inotangisa matsva ekuchaja dock kuApple Watch
Krisimasi iri kuuya kuApple: iyo yeKisimusi chipo gadhi yakagadzirira
Kiwi yeGmail yeMac inovandudzwa kusanganisira mafirita kuitira kuti tsamba yako irongwe